Ukubaluleka kokungena kwemali kwimpilo yezemali | Ezezimali
Kwilizwe lanamhlanje elinobumbano, ukuvela kweenkampani ezintsha kuye kwanda ngokuxhaphakileyo, njengoko izixhobo zeteknoloji ezifeze ukukhula okukhulu kule minyaka idlulileyo, ezinje ngezicelo ezahlukeneyo ezinokusetyenziswa kwi-intanethi, ziye zabangela ukuba oosomashishini abaninzi baqale amashishini. oko kunokwahlulahlula kwizithintelo zobuchule ezinokufumaneka eofisini.
Ngokufanayo, iinkampani ezinkulu ziyaqhubeka nokukhula ngokuzinzileyo, Ke ngoko, namhlanje kunokwenzeka ukudibana nohlobo olubanzi lwamashishini kunye neenkampani zazo zonke iintlobo.
Nangona kunjalo, ezi azenziwanga ngobusuku nje obunye kwaye ukuze zihlale zizinzile kwaye zikhule kangangeminyaka emininzi, kuye kwafuneka ukuba zilawule ngokwaneleyo ukusukela ekuqaleni, kuba akukho shishini likwaziyo ukoyisa kwicandelo loshishino lokhuphiswano namhlanje, ukuba akunjalo. ngokusebenzisa i Ulawulo oluphezulu kunye nemali ebavumela ukuba bajongane nokwehliswa okukhulu kwengeniso okanye ngeendleko ezinkulu ngesiquphe ezinokubulala ezo nkampani kunye namashishini angakhuselwanga ngokwemali.
1 Kuthetha ntoni ngokuhamba kwemali?
2 Zeziphi iintlobo zesicelo esinokuthi izifundo zokuhamba kwemali zibe phakathi kwenkampani?
2.1 Ukusombulula iingxaki zenkampani:
2.2 Ukuhamba kwemali kukuvumela ukuba uhlalutye ukusebenza kweeprojekthi zotyalo-mali:
2.3 Linganisa inzuzo kunye nokukhula:
3 Ziintoni izinto ezibandakanya ukuhamba kwemali?
4 Yintoni ukubaluleka kokufaka ukungena kwemali kumashishini anamhlanje?
5 Zeziphi iintlobo zokuhamba kwemali ezikhoyo?
6 Ngaba kukho umda kubalo lokuhamba kwemali?
Kuthetha ntoni ngokuhamba kwemali?
Ukuze usombulule iingxaki ezinxulumene nobutyebi kunye nenzuzo, ongumba onokudibana neenkampani ezintsha, okanye ezinokuchaphazela neenkampani ezinkulu esele zisekiwe, siyifumana umba wokuhamba kwemali, ekwabizwa ngokuba ukuhamba kwemali okanye ubunondyebo, indlela yenoveli enokuqondwa njengesalathi esinika ulwazi malunga nemeko yezemali yeshishini elincinci okanye inkampani enkulu, oko kukuthi, imalunga nokugcina umkhondo wokungena nokuphuma kwemali okanye imali ngexesha elinikiweyo, Isixhobo esivumela ukuba sazi ngakumbi iindleko kunye nengeniso yenkampani. Ngamafutshane, imalunga nokufumana ulungelelwaniso phakathi kweemfuno zethu kunye nokukwazi kwethu ukusombulula ezoqoqosho.
Zeziphi iintlobo zesicelo esinokuthi izifundo zokuhamba kwemali zibe phakathi kwenkampani?
Ukuhamba kwemali kunokuba nemisebenzi eyahlukeneyo Ukuqinisekisa uzinzo kwinkampani. Ezinye zezona zinto zisetyenziswayo zinokusetyenziswa kwezi meko zilandelayo:
Ukusombulula iingxaki zenkampani:
Amaxesha amaninzi, kuhlala kucingelwa ukuba ukuqinisekisa ukusebenza kakuhle kwenkampani kunyanzelekile ukuba ibe nenzuzo, oosomashishini abaninzi abancinci baphulukana nethuba lokukhulisa amashishini abo, besilela kwezinye zezinto ezisisiseko ekufuneka behleli benazo engqondweni xa besenza inkcitho nendleko ezinokukhokelela ukuhamba kwemali okungalunganga. Kungenxa yoko le nto ukhetho lokuhamba kwemali likuvumela ukuba ulindele ibhalansi yemali, ngenjongo yokuba ungaze ube neengxaki zemali, imeko ekungafuneki ukuba ivele kuyo nayiphi na inkampani nokuba iyinzuzo.
Ukuhamba kwemali kukuvumela ukuba uhlalutye ukusebenza kweeprojekthi zotyalo-mali:
Ukuze wazi izibonelelo ze bazame ukutyala imali kwiprojekthi ethile yoqoqosho, ukuhamba kwemali kukuvumela ukuba usebenzise ukungena nokuphuma kwemali okusisiseko sokubala ixabiso langoku elipheleleyo kunye nomyinge wangaphakathi wembuyekezo onayo. Ngale datha, ungazazi izinto ezilungileyo nezingalunganga zayo nayiphi na iprojekthi yotyalo-mali onayo engqondweni.
Linganisa inzuzo kunye nokukhula:
Ukuhamba kwemali kukwavumela ukuba ulinganise inzuzo kunye nokukhula elinokuba nalo ishishini ngexesha elithile, ngakumbi kwezo meko apho imigangatho yobalo-mali ingabonakalisi ngokwanelisayo ubunyani boqoqosho lweshishini elo.
Ziintoni izinto ezibandakanya ukuhamba kwemali?
Ukuhamba kwemali sisalathiso esihlala senziwe ngezi zinto zilandelayo: Inzuzo + yokuhlawula amatyala + amalungiselelo.
Ezi zinto zintathu ziyimfuneko ukuze sikwazi ukwenza uhlalutyo lokuhamba kwemali, ngendlela eya kuthi, ngokwezibonakaliso, zombini ukuhlawulwa kunye nezibonelelo ziindleko ekufuneka zongezwe kwizibonelelo ngokwexesha elithile, hayi oku zimele ukuphuma kwemali, oko kukuthi, ngaphandle kweendleko, ukubhatalwa kwemali akufuneki kuthethe ukuphuma kwemali, kuba zimele ukuncitshiswa kwengeniso yonyaka ngokwemigaqo yocwangciso-mali, kodwa oku akuthethi ukuba intlawulo enjalo. Into ebalulekileyo kukuba imali, oko kukuthi, indawo yokugcina imali ihlala ifumaneka. Injongo yale nkqubo kukuba ngokuhamba kwemali, umntu uyakwazi ukwazi ukuba zeziphi izibonelelo zemali ezinikwe ishishini elinikiweyo, oko kukuthi, isixa semali esinokuveliswa yinkampani ngexesha elithile.
Yintoni ukubaluleka kokufaka ukungena kwemali kumashishini anamhlanje?
Ukungena kwemali kubaluleke kakhulu namhlanje, kuba sisixhobo esisisiseko esinokuthi sigcine umkhondo waso semali eveliswa yinkampani. Le datha ibalulekile ukuze sikwazi ukwazi impilo yethu yezemali kwaye ke sikwazi ukukhokelela kwindaleko ishishini lethu okanye inkampani eya kuba nayo ekuhambeni kwexesha. Ngokunjalo, ukusebenzisa ngokufanelekileyo ukuhamba kwemali kuya kusivumela ukuba senze izivumelwano ezingcono kunye nezinye iinkampani kunye nabanikezeli ngeempahla, kuba ngokwazi ukuhamba kwethu kwemali, siya kuyazi indlela yokuthobela iintlawulo zethu okanye ukuba zeziphi izibophelelo ezinokusekwa ngokuhambelana nemali inkampani ishishini.
Zeziphi iintlobo zokuhamba kwemali ezikhoyo?
Ngokwemvelaphi yabo kukho Ulwahlulo olwahlukileyo lokuhamba kwemali apho sinokubhenela ekusombululeni ingxaki ethile ngokubhekisele kwimali yokuhlawula amatyala okanye ukusombulula iingxaki kwishishini.
Ukuhamba kwemali: Yimali efunyenweyo okanye ehanjisiweyo ngenxa yesiseko sezoqoqosho esinazo inkampani. Isishwankathelo, sibhekisa kwinani lemali ephakanyisiweyo enkosi kwimisebenzi yoqoqosho esisiseko yenkampani.
Utyalo mali: Yimali eqokelelweyo okanye esetyenzisiweyo emva kokuthathela ingqalelo inkcitho yotyalo-mali enokuthi ibe luncedo kwishishini kwikamva elinikiweyo. Into ebalulekileyo ngolu hlobo lokuhamba kwemali kukuba lonke olu tyalo-mali lunokuxhamla kamva luyaqwalaselwa, njengokuthengwa koomatshini abatsha kumzi-mveliso, umzekelo, okanye inyani yokuzinikela kutyalo-mali olutsha okanye kubafumani zivelise izibonelelo zazo kwixa elizayo.
Ukuxhasa imali ngokuhamba kwemali: Yimali eqokelelweyo okanye esetyenzisiweyo ngenxa yemisebenzi eyahlukeneyo yemali enokwahluka kwiintlawulo okanye ekufumaneni imali mboleko ukuya ekunikezelweni okanye ekuthengeni izabelo. Ewe kunjalo, kukho inani elikhulu lemisebenzi yezemali ekunokuthi kufunyanwe okanye kuhlawulwe ngayo imali, yiyo loo nto olu hlobo lokuhamba kwemali kufanelekile ukugcina umkhondo wemali elawulwa kwaye ifunyenwe kwiintshukumo ezahlukeneyo zenkampani.
Ngaba kukho umda kubalo lokuhamba kwemali?
Eyona ndlela isetyenzisiweyo neyaziwayo ukubala ukuhamba kwemali Yinto eyaziwa ngokuba kukungena kwemali kwemali. Le fomyula yenye yezona zisetyenziswayo, ngakumbi kwimithambo eyahlukeneyo eyenzelwe ukuthelekisa, nangona kunjalo, inesithintelo esibaluleke kakhulu, esinikwa ngumgaqo obizwa ngokuba kukuqokelela.
Ngokusisiseko, oku kubandakanya ukufaka ingeniso njenge UNondyebo kwi-Profit, ekude kakhulu nokungqinelana nenyani. Isizathu kukuba xa ii-invoyisi zenzelwa intengiso, izibonelelo zentengiselwano esele zirekhodwe, nangona kunjalo oku akuthethi ukuba siqokelele ixabiso lentengiso. Ngamanye amagama, le ngxaki ivela kuba namhlanje iinkampani ezininzi zihlala zinezivumelwano kunye nezivumelwano nabathengisi okanye ngokuchaseneyo.
Izivumelwano okanye izivumelwano zibandakanya, umzekelo, wokunikezela iikhredithi ukuze usebenze ngempumelelo kwintengiso, oko kuthetha ukuba ukuthengwa kuyenziwa kodwa imali yentengiso ayifumaneki kwangoko. Umzekelo, ukuba umboneleli uyakwazi ukuthengisa uthotho lweemveliso okanye izinto ezinexabiso elithile kwinkampani, kuyinto eqhelekileyo ukuba kuthengwe kwenziwe ngemali, kodwa kule mihla kuyenzeka, rhoqo kakhulu, ukuba ukuthengiswa kweemveliso ngetyala okanye ekubekweni ngokwemeko yokusebenzisa okanye isibonelelo esifunyanwa yinkampani kwezi mveliso.
Ngokuhambelana ukuthengisa ngetyala Zivela kaninzi kwii-invoyisi zeshishini, kodwa ngesiqhelo kufikelelwa kwisivumelwano nomthengi ukuze sihlawulwe kamva, ke ixabiso lokuthengisa alikho kwimali engamanzi kodwa limele inzuzo engeniswe kwi-invoyisi nangona imali iya kufunyanwa kwikamva elithile.
Le yinto eyaziwa ngokuba yintengiso emiselweyo kwaye xa ithiwe thaca, kuyinto eqhelekileyo ukuba inxenye yentengiso yonyaka omnye, kunye nezibonelelo zayo, iya kuhlala ilindele ukuqokelelwa kude kube ngunyaka olandelayo, ewe, kwimeko apho yonke into ihamba kakuhle, kuba ukuba izinto zihamba gwenxa kulowo uthenga izinto kuthi phantsi kwale meko, ezo ntengiso azizukuhlawuliswa, kuba esi sisibonelelo esinikwa ukuba nje sinoluhlobo lwesivumelwano apho siza kuthenga khona ixesha nemozulu. Ingxaki kukuba sele sirekhode ezo ntengiso kwii-invoyisi xa kungaqinisekiswanga ukuba sizakuyifumana imali kubo.
Isisombululo solu hlobo lwengxaki kukuba sixhotyiswa ngezixhobo ezininzi ukulinganisa amanqanaba emali okanye ukuthengiswa kweshishini, nokuba yeyangoku okanye icwangcisiwe, ukuze sikwazi ukuyilawula ngcono nokubala ngcono iindleko kunye nezibonelelo. iintshukumo zemali esizenzayo.
Akuthandabuzeki ukuhamba kwemali okanye ukuhamba kwemali, Sisibonelelo esigqibeleleyo sokwenza uxanduva lokuphendula esinokukwenza ukuphucula inzuzo kunye nezibonelelo zeshishini lethu okanye kwinkampani. Ngokusebenzisa le ndlela ngokuchanekileyo, ngokuqinisekileyo siya kuba linyathelo elinye phambili kwindaleko yeshishini lethu, kwaye ngomzamo wakho nokuzimisela, siya kuba nakho ukukhulisa de ibe yinkampani eneziqhamo, ayisiyiyo kuphela Inenzuzo kodwa ikwanemali eninzi ukujongana nayo nayiphi na imeko engalindelekanga yezoqoqosho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Izaziso » Ukubaluleka kokungena kwemali kwimpilo yezemali